Yini amadiphozithi ahlelekile? | Ezezimali Zomnotho
Uma lokhu okucabangayo ukuthi amadiphozithi ahlelekile afana nalawo wendabuko owawenawo kuze kube manje, ngabe ngabe ubulokhu uphutha. Akumangalisi ukuthi zinomehluko omkhulu njengoba zakha amamodeli wokutshala ahluke ngokuphelele. Ukufika ezingeni lokuthi banezici ezichazwe kakhulu ezenza ukuthi badlulisele imikhiqizo eneqiniso ubuntu bokutshala imali. Kunoma ikuphi, kuzoba ngenye yezindlela ongazenza ukuze ukonga kuzuze kusukela manje.
Uma imali ehleliwe ihlukaniswa okuthile, kungenxa yokuthi awunikeli imali etshaliwe uma nje uhlonipha isikhathi esinqunyelwe lapho le mikhiqizo yezezimali iqondiswe khona. Akumangalisi ukuthi ngamunye wabo une- usuku lokuphelelwa isikhathi, noma ngabe iyiphi impahla yezezimali eyakhiwe ngayo. Ngezikhathi ezahlukahlukene ukuze zikwazi ukuguqulelwa kunoma iyiphi iphrofayili yomtshalizimali omncane naphakathi. Ukusuka kokunolaka kakhulu kuya kokuzivikela kakhulu, ngaphandle kwemikhawulo yanoma yiluphi uhlobo kulokhu, ngale kwezimo zamadiphozithi ahleliwe ngokwawo.
Kumele uqaphele ukuthi inqobo nje uma ugcina utshalomali lwakho esikhathini esivunyelwe ngeke ube nankinga gcina yonke imali efakiwe. Okungukuthi, u-100% weminikelo oyenzile kulo mkhiqizo wezezimali. Inkinga izovela uma ungazihloniphi lezi zikhathi zokugcina, futhi lapho ungalahlekelwa yingxenye yemali etshaliwe. Sengathi kungukutshalwa kwezimali ezimakethe zezimali. Kunoma ikuphi, ungakhetha isikhathi esiphakathi konyaka owodwa kuya kwengu-1. Ivumelana nezimo kakhulu futhi ukuze ukwazi ukuhlangabezana nezidingo zakho zezezimali.
1 Okuhlelekile: iminikelo engaphelele noma ephelele
2 Bakhonjwa kanjani?
3 Inzuzo yangempela yalezi zimali
4 Ukubopha kwe-impositions
5 Izici ezihlelekile
6 Yini ububi bayo?
Okuhlelekile: iminikelo engaphelele noma ephelele
Ngokuphambene nalokho, uma udinga ingxenye noma lonke utshalomali, yilapho izinkinga zokuqala zingavela khona. Ngomqondo wokuthi uma udinga ukubuyisa utshalomali lwakho, ngokwengxenye noma ngokupheleleNgaphambi kokuphela kwethemu, ungakwenza ngokusebenzisa amafasitela akhokhwa njalo ngenyanga acatshangelwa yile mikhiqizo yezezimali. Kepha kuleli cala elithile, alikwazi ukuqinisekisa lonke utshalomali. Kufike ezingeni lokuthi ungalahlekelwa yimali ethile ekusebenzeni.
Kungumkhiqizo webhange ongawaqasha kusuka kuma-euro ayi-1.000 nje. Ngenkathi ethile yokuqashwa: uma isikhathi sokubhalisile noma inani eliphelele elibekiwe seliphelile, akunakwenzeka ukubaqasha futhi. Njengoba ukwazi ukubona, akuyona imodeli yokutshala imali edinga kakhulu futhi ngalo mqondo ingafakwa kumadiphozithi ajwayelekile emakethe. Lokho kungukuthi, njengenye intela yethemu, enokuhluka kwayo okulandelayo.
Izimali ezihleliwe akudingeki ziboshelwe emholweni ohleliwe, ngoba kubonakala kunengqondo kakhulu. Ngisho nezimakethe zamasheya. Uma kungenjalo, ngokuphambene nalokho, zingavela noma iyiphi impahla yezezimali, njengesilinganiso sokulinganisa saseYurophu, esaziwa njenge-Euribor. Lapho benesikhathi sokubhalisela esinzima kakhulu futhi kuze kufike ekutheni uma weqa izinsuku ngeke ukwazi ukubhalisela ngaphansi kwanoma yisiphi isici. Hhayi njengamadiphozi wendabuko ongakwenza yenze ibe semthethweni okwamanje uma ucabanga ukuthi kulula kakhulu ukuvala lo msebenzi.
Imishini yokuqasha ilula kakhulu ngoba kunezinsuku ezintathu zebhizinisi zokuba ube neyodwa ukugcinwa ku-akhawunti ehambisanayo kwidiphozi yemali eceliwe. Kepha uma nganoma yisiphi isizathu kungekho ibhalansi eyanele, uhlelo lokusebenza luzokhanselwa. Lo umehluko omncane obahlukanisa neminye imikhiqizo yezezimali. Ngaphandle kwezindlela zayo zobuchwepheshe ezihambelana nesigaba esihluke ngokuphelele futhi esizohlaziywa kwezinye izindatshana. Ngakolunye uhlangothi, kukhona nosuku oluzosebenza ukusetha amanani futhi okuzoba yilona oluzocacisa inzuzo yangempela yamadiphozithi ahlelekile.
Inzuzo yangempela yalezi zimali
Kungenzeka ukuthi usuvele uyazibuza ukuthi liyini inani lenzalo ozoyithola kumadiphozithi ahlelekile. Yebo, kuzoba nokuncintisana okuthe xaxa kunangezinye izithiyo. Ngalesi sikhathi ingatholakala phakathi kuka-0,20% no-0,90%, kuya ngemodeli oyikhethile. Lapho, lo mkhiqizo omusha uzokhokha umkhiqizo uzokhokha isigqebhezana samaphesenti ahambisanayo enzuzo. Okusha kuqhathaniswa nezinye izindlela zokwenza imali enqwabelene ibe nenzuzo.
Ngakolunye uhlangothi, awukwazi ukukhohlwa kusukela manje kuqhubeke ukuthi lawa madiphozi akhethekile abonakala ngokuba yinkimbinkimbi kakhulu kunokunye. Ngaphezu kwalokho, azithandeki kubabeka imali ngenxa ye- Izikhathi zokugcina ezinjalo athengiswa ngazo. Ukufika ezingeni lokuthi ezinye izinhlobo zemikhiqizo yokonga ziyathandwa. Akumangalisi ukuthi ukukhuphuka kwenzuzo akukubi kakhulu futhi kukhuphula kuphela ngamaphesenti ayishumi wephoyinti. Njengenye yezingqinamba ezinkulu ekubhaleni imali ehleliwe.
Kunokuxhumana okuningi kule mikhiqizo njengoba kunezimpahla zezimali futhi, futhi ngokwesibonelo, iBanco Santander eyakhiwe ngama-euro ixhunyaniswe nokuphepha kweVodafone, i-Eon, i-Eni ne-Orange. I-BBVA, ngokwengxenye yayo, icabanga ngokulondolozwa kwayo inikezela ngesethenjwa esakhiwe kumasheya eRepsol. Kunoma ikuphi, uma umsebenzisi efisa, angabhekisa nale modeli yokonga ku ezinye zezimali, ikakhulukazi ngedola laseMelika. Yize umphumela wayo uzohluka ngokuya ngentengo yawo ezimakethe zezezimali, ngokuguquguquka okukhulu kokulindelekile ekunikezayo okwamanje.
Ngakolunye uhlangothi, kunamabhizinisi amaningi asebhange anqume ukubheja ekwenzeni ngcono inzuzo ngamadiphozithi axhunywe kuyo amasheya, ama-indices noma izimali ezihlangene. Kuyindlela engaqondile yokuzibeka ezingeni lemali ngaphandle kokuthatha izingozi eziningi. Ngoba izikhundla ezingezinhle kulezi zimpahla zezezimali ziyancishiswa futhi kuze kube sezingeni lokuthi ukulahlekelwa akukhuphukanga kakhulu njengoba kungenzeka ngemikhiqizo eshiwo ngenhla. Ngalo mqondo, kungumxube okhethekile ngandlela thile phakathi kwemali engenayo engaguquki namamodeli wokutshala imali akudala.
Iminikelo yamadiphozithi ahleliwe ichazwe kahle kakhulu futhi, okokuqala nje, inikela ngenani lenzalo eliphakeme kancane, eliphakathi kuka-0,20% no-0,70% ngokuqokwa. Kodwa-ke, inani layo lokugcina lincike ephesentini le- ukusatshalaliswa kwemali futhi kusukela esikhwameni kuya kwempahla yokutshala imali ekhethwe ngumsebenzisi. Ngomunye umqondo, iqiniso lokuthi enye yezingqinamba zalolu hlobo lomkhiqizo ukungazi inzuzo yokugcina esizoyithola lapho iphelelwa yisikhathi ngeke kungabonakali. Ngokungafani nokufakwa kwendabuko lapho inzuzo etholakalayo yaziwa khona kusukela ekuqaleni.
Lapho kukhona khona ukuqondana okusobala okusobala kwezokuphepha lapho kunikezwa khona ukuqashwa kwakho. Ngoba empeleni, kungumkhiqizo ophephile ngoba ulawulwa yiBhange LaseSpain kanye Nesikhwama Sesiqinisekiso Sediphozithi. Ukuqinisekisa kuze kufike ku-100.000 euro ngesikhwama nangesihloko noma yisiphi isehlakalo esingase senzeke nomkhiphi. Noma ngabe kunjani okufanayo nebhizinisi lapho kuqashwe khona. Akunakukhohlakala ukuthi zilawulwa yiNational Securities Market Commission (CNMV), enikela ngokuvikelwa okukhulu kofaka imali.
Yini ububi bayo?
Kunoma yikuphi, okubhalisile kuphethe uchungechunge lobuthakathaka okufanele ubucabangele ukubona ukuthi kufanele yini noma cha ukubenza kube semthethweni. Phakathi kwazo kukhona okulandelayo esidalula kuwe ngezansi:
Imali ehleliwe isebenza ku- izimakethe zesibili futhi ngenxa yalokho uzoba nezinkinga eziningi zokuhlehlisa izikhundla ngesikhathi osifunayo.
Izici zobungozi obuphakeme zikhona, njengalezo ezihlobene ne- isikweletu sasebhange nokuthi bangadala enye inkinga ekutshalweni kwemali.
Izimakethe lapho izinkampani ezihlelekile zisebenza khona zibonakala ngokuthi zibonakala ngokungabikho e ukugadwa kwangaphandle. Into ekhawulela ukuvikeleka okunikezwa lo mkhiqizo wezezimali.
Basenkingeni ethile maqondana nezimpahla zendabuko ngoba izimakethe zesibili lapho zizosebenza khona zakha i- ukwehliswa kwemali okuncane. Lokhu kuyinto ebaluleke kakhulu ekutshaleni imali oyongele kumkhiqizo wezezimali.
Futhi ekugcineni, mhlawumbe ayikunxephezeli ukuqashwa kwakho ngenzuzo abayinikelayo njengamanje futhi lokho kungakwenza ukhethe ezinye izindlela zokonga ezingaphansi kwezinkimbinkimbi futhi ngaphandle kwezingozi eziningi kangaka.
Ngokuphambene nalokho, imali ehleliwe ikuvumela ukuthi uveze izigaba ezahlukahlukene zezimpahla zezimali, ezinye zazo ongakaze uzicabange izikhundla zokuvula ukwenza imali yakho inenzuzo. Ngakolunye uhlangothi, igcina ukwaneliseka okuhlakaniphile lapho kulinganiswa inzuzo yayo kanye nezingozi ezikhiqizwa ekusebenzeni kwayo. Futhi iqiniso lokuthi kungatshalwa imali ukuze ivumelane nawe ngenxa yezimpawu zayo ezibaluleke kakhulu. Ngaphandle kokukhohlwa, yiqiniso, ukuthi zingakusiza uthuthukise ukusebenza uma okulindelwe kufinyelelwa ekugcineni. Ngokutholwa kotshalomali sekuvuthiwe, okuyikho okumayelana nalokhu.
Indlela ephelele ye-athikili: Ezezimali Zomnotho » Imikhiqizo yezezimali » Yini amadiphozithi ahlelekile?
Izinkomba ezinhlanu zokuhweba emakethe yamasheya
Intela yethemu exhunywe emakethe yamasheya